Mayelana nathi - LGLPAK LTD.
I-LGLPAK ™ - Izazi Zokupakisha
LGLPAK™ senza, singenise ngaphakathi, futhi sinikeze zonke izinhlobo zokupakisha, eziguquguqukayo. We ngokukhethekile Polyethylene Izikhwama, Tubing, futhi Film. Siyakwazi ukuklama ngokwezifiso nokukhiqiza izikhwama zepulasitiki ngezitayela eziningi, imibala nokuphrinta ukuhlangabezana nezidingo zakho zokupakisha ezahlukahlukene. Siphinde futhi sinikeze iqoqo elikhulu losayizi abavamile besikhwama nezitayela. Singumthombo wakho wokuma owodwa wokupakisha okuguqukayo.
Izixazululo Zokupakisha Ngokwezifiso
Ngobuchwepheshe besimanje ku-extrusion, ukuphrinta, nokuguqula sakha izixazululo zokupakisha ezihlukile zezimboni zazo zonke izinhlobo. Thembela kuthimba lethu lochwepheshe bokupakisha ukukusiza ukhethe izinketho ezifanele zohlelo lwakho oluthile. Uma udinga ukuphrinta ngokwezifiso nomsebenzi wobuciko, umnyango wethu wokudala ngaphakathi uhlala ulungele ukukusiza ukuthi uguqule imibono yakho ibe yimikhiqizo yokupakisha.
Njengomholi wemboni yokupakisha epulasitiki, i-LGLPAK™ uzuze isiqu esithi “the Ochwepheshe Bokupakisha”. Ngamandla ethu okukhiqiza asekhaya nakwamanye amazwe, singahlangabezana nanoma yisiphi isidingo sokupakisha kwesitoko noma sokwezifiso onakho. Noma ngabe i-oda lakho likhulu noma lincane, lilula noma liyinkimbinkimbi, dweba ubuchwepheshe bethu ukukusiza uhlangabezane nazo zonke izidingo zakho zokupakisha.
Ukunakekelwa Kwekhasimende Okungenakuqhathaniswa
Amakhasimende ethu ahlala esincoma ngokunakekelwa okuhlukile abhekana nakho enhlanganweni yethu yonke. Silwela ukuthuthukisa ubudlelwano bamakhasimende besikhathi eside obusekelwe ekwethembaneni nangenhlonipho. Akunandaba ukuthi yini isidingo, ungathembela kuthimba lethu eliwina imiklomelo lamakhasimende ukusingatha isicelo sakho mathupha nangobuchwepheshe.
Uma ukhetha i-LGLPAK™, uthola umlingani onolwazi onikezelwe ekunikezeni izixazululo ezingcono kakhulu zokupakisha zebhizinisi lakho. Isithembiso sethu silula: Sizokulethela izixazululo ezinhle kakhulu zokupakisha ngentengo ephansi kakhulu! Kuqinisekisiwe!
Inhlangano yethu yonke iqhutshwa ukuzibophezela ekwenzeni okuhle kanye nesifiso sokudlula okulindele. Siya kuwo wonke ubude ukuqinisekisa ukuthi izinqubo zethu, izinsizakalo, nemikhiqizo yethu yeqa izindinganiso zemboni. Okwethu Isitifiketi se-ISO ikuqinisekisa ngekhwalithi engaguquguquki emikhiqizweni nasezinsizakalweni, ukuxazululwa ngokushesha kwezinkinga nokuzinikela kwethu ekuthuthukeni okuqhubekayo. Siyazethemba kakhulu imikhiqizo nezinsizakalo zethu okuqinisekisa ukuthi uzokwaneliseka ngo-100%, noma sizokwenza okudingekayo ukuze sikulungise.
1.Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-10 sokukhiqiza nokuthumela kwamanye amazwe.
2.Umsebenzi ophelele. Sihlale sizibophezele ocwaningweni nasentuthukweni.
3.Qinisekisa ukuthi imikhiqizo ihlangabezana namazinga ekhwalithi.
4.Qinisekisa ukuthi izimpahla zilethwa ngesikhathi.
5.Isevisi yobungcweti nobungani nensizakalo eseyithengisiwe.
6.Kuqinisekiswe ikhwalithi enhle kanye nensizakalo ehamba phambili.
7.Imiklamo ehlanganisiwe, imibala, izitayela, amaphethini nosayizi kuyatholakala.
8.Imininingwane eyenziwe ngezifiso yamukelekile.
"UMlingani Wakho Weplastiki"